China Isikebhe Esizimele Sihlanganiswe Umshini Wokuvuna Umshini wefektri kanye nabaphakeli | RY AGRI
I-4LZ-7 / 4LZ-8 yezinhlamvu ezihlanganayo ezihlanganisa isivuno isetshenziselwa ukuvuna ukolweni, futhi ingavuna nelayisi. Umshini ungaqedela ukuvuna, ukubhula, ukwehlukanisa, ukuhlanza neminye imisebenzi ngasikhathi sinye. Umshini unesakhiwo esihlangene, ukusebenza okulula, ukusebenza okuguquguqukayo, ukusebenza kahle okuphezulu nemali yokuhola ngokushesha.
Injini ifaniswe namandla
Dimension sekukonke (L * W * H)
Ukususwa komhlaba okuncane
Ijubane eliqhubekayo ngesikhathi somsebenzi
Ukusetshenziswa kwephethiloli endaweni ngayinye
Ivolumu yethangi yokusanhlamvu
Isikulufa ukuzilayisha okwenziwe ngomshini
Ifakwe injini yamahhashi eyi-150-175, amandla aqinile nokusebenza okusebenzayo;
Yelula ibhokisi lesikrini, ungqimba oluphindaphindayo olubuyisa isidlidlizi sesikali senhlanzi, usihlanze;
Ijubane lokuthulula liyashesha, futhi ukuphakama kokulayishwa kungahlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zokwehlisa;
Uhlelo lokudlulisa amandla okukhipha lwenziwa ngcono, ijubane lokusebenza liyashesha, futhi amandla okubhula nokwehlukanisa anamandla;
Imigwaqo yasemakhaya inokudlula okuqinile futhi ilungele imisebenzi yasemaphandleni asemaphandleni;
Itanki lamanzi lokusabalalisa ukushisa linokushisa okuphezulu kokushisa, okungabhekana kalula nesimo sezulu esisebenza ngokushisa okuphezulu;
Wonke umshini usebenzisa i-lubrication eyodwa, okwenza ukusebenza kube lula futhi kuthuthukise ukusebenza kahle kokugcinwa;
Kunethezekile futhi Reliable
Isinciphisi esivaliwe, ukubekwa uphawu okuhle, umsebenzi onokwethenjelwa nokuphila isikhathi eside
Ziphethe bamba main, kulula ukusebenza, okonga zabasebenzi, futhi ngempumelelo ukunciphisa umsebenzi umfutho.
Ngaphezu kwekhwalithi yokukhiqiza yomshini uqobo, impilo yesevisi, isilinganiso sokuhluleka, ukuphepha nokuthembeka kwanoma yimuphi umshini nakho kuhlobene kakhulu nokusetshenziswa nokugcinwa komshini. Kufanele sinake la maphuzu alandelayo:
1. Opharetha womshini kufanele aqeqeshwe ekusebenzeni kwenhlanganisela futhi athole nezincwadi zokushayela ngaphambi kokuya emsebenzini.
2. Qiniseka ukuthi ufunda imanuwali yomkhiqizo ngokucophelela ngaphambi kokuyisebenzisa.
3. Ngoba izimo zezitshalo ezivuniwe zihluke kakhulu (njengezinhlobo zezitshalo, ukuvuthwa, okuqukethwe umswakama, isivuno, ukuphakama kwezitshalo nezimo zokulala, njll.), Ekusebenziseni inhlanganisela, izindlela ezifanele zomshini kufanele ilungiswe ngesikhathi esifanele ngokuvumelana nezinguquko zezimo zezitshalo, ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kokuhlanganiswa.
4. Ngesikhathi sokuhlinzwa, kufanele kuhambisane nezimfuneko zezimpawu ezifanele zokuxwayisa ukuphepha ukugwema izingozi.
5. Inhlanganisela kufanele ihlolwe, inakekelwe futhi inakekelwe njalo futhi ifike ngesikhathi.
6. Ayikwazi ukuguqula noma ukunqaba ngentando. Njengokwandisa isivinini senjini, ukukhulisa ukuphakama kwethangi lokusanhlamvu, njll.
Langaphambilini Umvuni Wommbila
Olandelayo: Okunye Pump Pump